Andry Rajoelina : Tompon’antoka tamin’ny vonoan’olona teto Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaAndry Rajoelina : Tompon’antoka tamin’ny vonoan’olona teto Madagasikara
Mitady ny hevitra rehetra hanadiovany tena ingahy Andry Rajoelina. Raha nodradradradrainy tamina haino aman-jery, ary tiany hampitaina amin’ny vahoaka fa tsy tompon’antoka tamin’ireny vonoan’ olona mahatsiravina teto amin’ny firenena ireny ny tenany, tsy afa-miala hatrany izy.
Voaporofo fa nataon’ity filohan’ny Tetezamita teo aloha ity sorona hoentina maka fahefana ny vahoaka tamin’ireny 2009 ireny. Matimaty foana ireo vahoaka. Nisy ny vonoan’ olona tamin’ny 26 janoary 2009 tamin’ny alalan’ny “Lundi Noir”, ary nitohy izany teny Ambotsorohitra ny 7 febroary 2009 tamin’ny alalan’ny fitarihana ireo vahoaka hanafika ny Lapa. Manala tena i Andry Rajoelina fa tsy izy no namono olona fa ingahy Marc Ravalomanana.
Raha ny tatitry ny Amnesty International, tsy nisy ny vonoan’ olona raha tsy nitarika ireo olona niakatra teny Ambohitsorohitra i Andry Rajoelina. Nohazavain’ny Amnesty International tsara mihitsy fa ny Lapam-panjakana eny Ambotsorohitra dia voasokajy ao anatin’ny faritra mena tsy azon’ny vahoaka aleha sy hidirana. Nanao ny asany ara-dalaàna ho fiarovana izany Lapam-panjakana izany koa ireo mpiambina tao anatiny. Tsy nisy ihany koa ny vonoan’ olona raha tsy nirahina nanatanteraka famakiana fivarotana ireo “Gros Bras” tamin’ilay “Lundi Noir”. Nisy mantsy ny fandorana ireo fivarotana maro ka betsaka ireo olona no kila forehitra tao anatiny.
Tsy vitan’izay ihany fa maro ihany koa ireo mpandraharaha no maty antoka tamin’ny fahasimban’ny trano fivarotany sy ny fahaverezan’ireo entana maro isan-karazany. Izany rehetra izany dia vonoan’olona avokoa.
Noho izay indrindra, dia nambaran’ny Amnesty International tamin’ny tatitra nataony momba an’i Madagasikara ho an’ny taona 2009 sy 2010 fa nozimbazimbaina sy nohitsakitsahin’i Andry Rajoelina ny zon’olombelona. Raha izany rehetra izany, mbola mihevitra ny ho olo-madio ve ingahy Andry Rajoelina? Ny tantara sy ny tatitra nataon’ny Amnesty International no manaporofo sy manabaribary fa namono olona teto amin’ny firenena ingahy Andry Rajoelina.